John Wayne: Gịnị mere Revolver ya, holster rig, magazin ndụ 1972?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » John Wayne: Gịnị mere Revolver ya, holster rig, magazin ndụ 1972?
Entertainment • fim • investments • News • ndị mmadụ • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Otu mgbagha nke John Wayne nwere ma kpakpando ọdịda anyanwụ jiri ya mee ihe na fim ndị eresiri n'oge na -adịbeghị anya maka $ 517,500 na Rock Island Auction Company (RIAC). Mbadamba egbe nke Colt nwetara atụmatụ dị ala nke ukwuu site na ụlọ ọrụ na-ere ahịa, mana mgbe o guzobechara ntọala, mmasị tolitere ngwa ngwa n'etiti ndị nchịkọta.
Wayne nwere ike ịhụ Colt Single Action Army revolver na fim ndị dị ka ezi grit, Oke ọkpa Cogburn, na Ụmụ ehi, N'etiti ndị ọzọ.
Agbakwunyere na mgbagharị ahụ bụ Wayne's holster rig, ọtụtụ akwụkwọ nkwado, yana mbipụta 1972 Life magazine
Magazin nke ndụ nwere Wayne na mkpuchi ya ma egbe na egbe.
Onye isi RIAC Kevin Hogan kwuru, "Ahịa mkpokọta anọwo na -enwe nnukwu uto n'ụdị dị iche iche." “Mgbe ị jikọtara abụọ n'ime ụdị ndị ahụ, ihe ncheta Hollywood na ngwa ọgụ, ọ nwere ike kpọọ ụfọdụ asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ. Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu maka onye na -ebubata anyị, anyị nwekwara obi ụtọ na ndị na -azụ ahịa anyị tụkwasịrị anyị obi na anyị ga -achọpụta ihe ndị a dị egwu. ”
Uto n'ahịa ndị na -achịkọta mkpokọta na -aga n'ihu na -egosipụta ọnụọgụ ahịa dị elu a hụrụ na mpaghara azụmaahịa. A gbakwunyere ọrịre nke enyere Wayne's Colt revolver na kalenda RIAC iji gboo mkpa na -arịwanye elu. Ihe omume ụbọchị atọ nwere ihe karịrị egbe mkpokọta 3 gbakwunyere arịa ndị agha, ngwa, ihe osise, na ihe karịrị nde $ 7,000.